Abbaa Duulaa Gammadaa: Jeneraala, Pireezidaantii, Af-yaa'ii ... Achii hoo? - BBC News Afaan Oromoo
Abbaa Duulaa Gammadaa: Jeneraala, Pireezidaantii, Af-yaa'ii ... Achii hoo?
Image copyright FACEBOOK/ADDISU AREGA
Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af Yaa'ii Mana Maree Federaala Dimookraatawaa Rippablika Itoophiyaa itti gaafatamummaa isaanii gadi lakkisuuf iyyannoo galfachuu isaanii kaleessa galgala OBN'tti himaniiru.
Waa'een iyyannoo galfachuu isaanii torban darbe keessa midiyaalee hawaasaa hedduun mata duree marii turuulleen qaama kamiiniyyuu yaadni osoo itti hin kennamiin tureera. Boodarra garuu, Abbaa Duulaan ofumaa mirkaneessuun gaaffii namoota hedduu deebisaniiru.
''Af yaa'ii ta'uun hojjachuu itti fufuu waan hin dandeenyee fi fedhiis waan hin qabneef jecha gaaffii kiyya dhaabaafi mana mareetti dhiyeeffachuun deebii eeggachaan jira.''
Hanga gaaffiin isaanii deebii argatutti, hojii af-yaa'ii malee kabaja ummataafi dhabbata isaan filateef jecha miseensa paarlaamaa ta'uun akka itti fufan dubbataniiru.
Akka jedhanitti itti gaafatamummaa isaanii gad-dhiisu taanaan DhDUO keessaa taayitaa olaanaa motummaa federaalaa ifatti ''nagaheera'' jechuun pireezidaantii biyyattii duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaatti aanani Abbaa Duulaan kan lammaffaa ta'u.
Kana malees, erga xalayaa argataniin booda sababii maaliif akka itti fufuu hin dandeenye ilaalchisuun ummataaf ifa akka godhanis eeraniiru. Haa ta'u malee, hanga dhumaatti hojiilee ummata isaanii fayyadu hojjachuu akka itti fufan waadaa galaniiru.
Abbaa Duulaan Eenyu?
Abbaa Duulaan nama ganna 60'ti. Naannoo Oromiyaa godina Arsiitti kan dhalataniifi abbaa maatii ta'uun isaanis ragaaleen ni mul'isu.
Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa qabsoo hidhannoo irraa eegaluun namoota Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo hundeessuuf namoota adda durummaan gumaachan muraasa keessaa tokko.
Erga sirni Dargiin kufee kaasee, Abbaa Duulaan itti gaafatamummaa looltummaa fi siivilii garaa garaa irratti tajaajilaniiru.
Lola daangaa Itiyoo-Eritiraa, lubbuun namoota hedduu itti bade keessattis Abbaa Duulaan hoggantoota adda waraanichaatti gahee olaanaa gumaatan keessaa tokko.
Erga waraanichi xumurameen booda gargar hiramuu Adda Warraaqsa Bilisa Baasaa Ummata Tigree (TPLF) jidduutti umamee tureen, qondaaltoonni ADWUI baayyeen itti gaafatamummaa irraa akka ka'an taasifamee ture.
Isaan booda egaa A.L.A. bara 2005'tti Abbaa Duulaan, Obbo Kumaa Dammaqsaa bakka bu'uun pireezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun tajaajilu kan eegalan. Achiinis hanga 2010'tti pirezidaantii ta'uun naannicha tajaajilaniiru.
A.L.A. bara 2010 irraa kaasuun hanga amma itti-gaafatamummaa gadi lakkisuuf iyyata itti dhiyeefatanittis, af yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummata biyyattii ta'uun tajaajilaa turaniiru.
Fudhatamni qaban maal fakkaata?
Obbo Abbaa Duulaan tibba pireezidaantii turanitti qondaaltootaa fi ummata naannichaa biratti fudhatama guddaa argachuun isaanii ni dubbatama.
Kanaafi fakkaata ammalleen, miseensoonni DhDUO fi Oromoonni hedduun erga iyyata kana galfachuun isaanii dhagahameen booda, suuraa Obbo Abbaa Dulaa mallattoo Feesbuukii isaanii taasifachaa kan jiraniif.
Wayita pireezidaantii turanittis, rakkoo cimaa lagaan walhiruun walqabatee naannichatti ummanni misooma irratti akka hin xiyyeeffanne danqee ture cabsuun, miira tokkummaa dagaagsuu akka danda'elleen keessa beektonni ni dubbatu.
Fudhatamaa fi deeggarsa olaanaa argachuu isaaniin hojiileen gaggaarii bara sana keessa raawwatamani ture.
Haa ta'u malee, bakkuma fudhatamni isaanii kun dabalaa jiru, gara federaalaatti deebi'uun akka tajaajilaniif waamichi taasifamuunsaa, namoota hedduutti gaaffii uumee ture. DhDUO fi Caffee naannichaatiinis komiin walfakkaataan ka'ee akka turelleen ni yaadatama.
Goodayyaa suuraa Mormiin sababa maastar pilaaniin jalqabe haga ha'aatiillee itti fufeera
Gama gahumsaatiin hoo?
Abbaa Duulaan Yunivarsiitii biyya Chaayiinaatti damee barnoota hoggansa loltummaa barataniiru.
Itti-aansuunis damee barnoota bulchiinsa ummataatin digirii tokkooffaa fi lammaffaa argachuu isaanii seenaan isaanii ni mul'isa.
Sababni aangoo dhiisuu maal ta'u mala?
Akkuma beekamu, mormiin dhimma maastar pilaanii qindoomaa magaalaa Finfinneefi Oromiyaatiin walqabatee naannichatti umamee ture kan hanga har'aatti itti fufeef ka'umsa ture.
Abbaa Duulaan ammoo namoota dhimma kana tasgabbeessuu fi naannichatti nageenya buusuuf adda durummaan yaalaa turan keessaayi.
Akkasumas gaaffiin faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerratti qabdu heera mootummaa biyyattii boqonnaa 49(5) jalatti kaa'amulleen hojiitti osoo hin hiikamiin hanga har'aatti turuun isaa Oromoota hedduu muufachisuun isaa yeroo garaa garaa ni ibsama.
Dhiheenya kana immoo, walitti bu'iinsi daangaa naannoolee Oromiyaafi Somaaleetti uumame fala tokko malee yeroo fudhachuunsaa namoota hedduu yaachisaa jira. Kanumaan walqabatees badiinsa lubbuufi qabeenya hedduu akkasumas qe'eerraa buqqa'uu maatii kuma hedduutif sababa ta'eera.
Karaa biraatiin immoo, dhimma daangaa fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anif fala barbaaduu irratti harkifannaan gama mootummaa federaalaatiin mul'ate, Oromoonni biyya keessaa fi ambaatti argaman lammiisaaniif oonnachuun akka birmataniif kaka'umsa uumuun isaa ni dubbatama.
Gaaffiidhuma itti gaafatamummaa gadhisuuf Abbaa Duulaan dhiyeeffatan kanaafis mata-dureewwan kunneen sababa ta'unsaanii akka hinollee keessa beektoonni ni tilmaamu.
Goodayyaa suuraa Iyyannoon isaanii erga fudhatama argatee booda sababa isaa akka beeksisan himaniiru
Garam deemu laata?
Aangoo gadi lakkisuuf erga iyyannoo galfatanii booda, karaa miidiyaalee hawaasatiin wantoonni hedduun hasa'amaa jiru.
Fedhiin namoota hedduus - sababa itti gadhiisanii fi ammaan booda garam akka goran baruudha.
Isaaniis iyyannoon isaanii erga fudhatama argatee booda sababa isaa akka beeksisan waadaa galaniiru.
Miseensa mana maree, itti gaafatamummaa DhDUO fi ADWUI keessaa qaban hunda gadhiisuu? Moo hojii af-yaa'ii ta'ani hojjetan qofa gadhiisu? kan jedhan gaaffii namoota hedduuti.
Abbaa Duulaanis, '' Gaaffiin koo hojii af-yaa'ii mana mareerraa gadhiisuu dha. Ummata na filatee fi dhaaba na filachiise waanin kabajuuf, miseensa paarlaamaa ta'ee ittan fufa,'' jedhaniiru.
Haa ta'u malee, faayidaa aangawoonni mootummaa argatan keessaa tokko kan tahe mana jireenyaa isaanii gadhiisuun isaanii himameera. Kun ammoo, murtoon isaanii hojiilee mootummaa kaan irraas fagaachuu akka danda'anis mul'isuu danda'a jedhamaa jira.
Waa'ee dhimma kanaa Obbo Abbaa Duulaa dabalatee, hoggantoota federaalaa fi naannoo bilbilaan hasoofsiisuuf yaaliin BBC'n taasise hin milkoofne.
Namuu yeroo manni maree banamu waan ta'u dhagahuuf waan gurra qeensee eegu fakkaata.